Soro ndị ahịa US rụkọọ ọrụ | Fukang
Soro ndị ahịa US rụkọọ ọrụ
Ngwaahịa na ọrụ anyị amatawo ndị ahịa America, ma anyị na anyị na-arụkọ ọrụ afọ atọ sochirinụ!
Anyị elu Fụọnụ Nkedo Machine kwa ụbọchị mmepụta nwere ike iru 10,000 / ụbọchị.
Ugbu a, anyị na-ahụ igwe a mgbe preform rutere ogologo oge, a na-ewere akụkụ nke ọkpọkọ ahụ ma debe ya na ebu ahụ, ma mechie ya. Ejiri ihe ebu; mgbe nke ahụ gasị, na abịakọrọ ikuku fụọ n'ime parison site ịfụ onu mezi kpaliri udi nke ịkpụzi oghere, mgbe ahụ ebu na-emeghe wepụ ngwaahịa. Otu ebu nwere oghere anọ, Mbekere aka na mmepụta kwa ụbọchị nwere ike iru 10,000 / ụbọchị.
Usoro okpu igwe niile bụ ihe nkedo-akpụzi
Usoro mkpuchi igwe bụ ihe mkpuchi niile. O nwere otu ebu nke nwere oghere ano, Otu ebu ya na nke nwere isi isii, Otu ebu ya na nke nwere oghere asatọ. ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke oghere nwere mmepụta dị iche iche. Nọmalị Otu ebu na cavities asatọ, kwa ụbọchị na mmepụta nwere ike iru 20,000 / ụbọchị.
Anyị igbu ịkpụzi igwe na-amị plastic karama
Ọgwụ-igbu ịkpụzi, a usoro nke ịkpụzi a ala-emechi parison site na ọgwụ na ịkpụzi igwe, na mgbe ahụ na-akpụ akpụ na parison n'ime igbu ịkpụzi anwụ na-afụ na abịakọrọ ikuku na-etolite a ngwaahịa. Ngwaahịa nke usoro a mepụtara bụ ntanye-akpụzi, ya mere nha ya ziri ezi, nkenke dị elu, ọ dịghịkwa mkpa ịkpụ; ala enweghi oghere, ya mere ike di nma, ma enwere ike inweta karama nwere ezigbo mma. Na mgbakwunye, ọnwụ ihe onwunwe pere mpe ma ọ dabara adaba maka imepụta otu ngwaahịa ahụ. ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke oghere dị iche iche na-emepụta kwa ụbọchị. Nọmalị Otu ebu na cavities abụọ, kwa ụbọchị na mmepụta nwere ike iru 20,000 / ụbọchị.
Usoro teknụzụ PET
1. Ime ọfọ ẹmbrayo 2. Ntọhapụ ẹmbrayo 3. Otu nzọụkwụ ịkpụzi nke PET kalama ẹmbrayo karama 4. karama furu 5. Mbukota onwe ha akpa
Label ịkụ ọkpọ
Igwe akụrụngwa akpaka 1.Tinye akara ngosi na-agagharị na igwe, ma tọọ igwe ahụ ka ọ dị mma Tinye otu karama ahụ n'otu n'otu na eriri ebu ebu 3.Ogo a ga - esoro eriri ebu ebu na mpaghara akara iji mezue akara akpaka Kalama preform akpụ Usoro okpu igwe niile bụ ihe nkedo-akpụzi. O nwere otu ebu nke nwere oghere ano, Otu ebu ya na nke nwere isi isii, Otu ebu ya na nke nwere oghere asatọ. ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke oghere nwere mmepụta dị iche iche. Nọmalị Otu ebu na cavities asatọ, kwa ụbọchị na mmepụta nwere ike iru 20,000 / ụbọchị. Ọ bụrụ na o nwere oghere asatọ, nke ahụ pụtara na ọ nwere ike mepụta mpempe akwụkwọ Preform asatọ n'otu oge, nrụpụta ọrụ a ka mma. A ga-ebufe karama preform site na ebu ebu na ịfụ igwe. Ogwe aka robot na-ejide preform karama ahụ, tinye ya na ọnọdụ nke igwe, wee nyefee ha na igwe na-agba ọkpọ, Mechie karama. Usoro teknụzụ PET 1. egba nwa n’afọ 2. Ntọhapụ ẹmbrayo 3. Otu nzọụkwụ ịkpụzi nke PET kalama ẹmbrayo karama 4. karama furu
PE Usoro teknụzụ
1. Pee extrusion karama ịfụ 2. Pee ngwugwu karama
Ndị a bụ usoro mgbakọ anyị
Ndị a bụ usoro mgbakọ akpaka anyị. Mgbe ọgwụ na-akpụzi igwe na-arụpụta parison, ọ na-akpaghị aka na-ebu ya site ebu ebu na n'ihu nke igbu ịkpụzi igwe, na robot akpaaka nzukọ na-arụpụta na nkwakọ ngwaahịa nke okokụre ngwaahịa; ọrụ nke onye ọrụ bụ naanị ịhazigharị, lekọta ma jikwaa eriri akpaka. esonyela na ọrụ ahụ; niile igwe na akụrụngwa na-n'otu site kwaa nke ọrụ, mmepụta usoro bụ ukwuu na-aga n'ihu.